Ama-tattoos e-Camaron, abalandeli bomculi we-flamenco odumile | abadwebi bomzimba
AmaTattoos wezimbali nezitshalo
Izinto nezinto ezidwetshwe emzimbeni
Ama-tattoos e-Camaron, abalandeli bomculi odumile we-flamenco
Nathi Cerezo | | Umlingiswa Tattoos
Ekhaya sigxile kakhulu kumaculo omdlalo wevidiyo, umculo we-rock wakudala nomculo we-elekthronikhi onjenge-Cut Copy, kodwa uma kufanele sibhale izindatshana mayelana Ama-tattoos e-Camaron, inganekwane ye-flamenco, baqedile futhi ngendlela esifunda ngayo izinto ezimbalwa, okuyinto engeyimbi futhi.
Ngakho namuhla Sizokhuluma ngama-tattoo e-Camarón, umlingiswa wakhe ongumculi-umbhali wengoma. Sizokhuluma kafushane ngokuphila kwakhe futhi sizoya epholile nokuthi yini oze ngayo ngempela ukuzofuna, imibono embalwa yazo zonke izinhlobo zama-tattoos avela kuzo. Futhi uma ushiywe ufuna okwengeziwe, bheka lezi ama-flamingo tattoos (nakuba lezi zivela esilwaneni, hhayi isitayela somculo!).
1 Wayengubani uCamarón de la Isla?
2 Imibono ye-Shrimp Tattoo
2.1 izimfanzi namaqiniso
2.2 I-tattoo yezandla zama-shrimp
2.3 izimfanzi zomqondo
2.4 Umculi wesitayela sendabuko
2.5 I-tattoo ye-Shrimp encane
2.6 I-tattoo ye-shrimp tattoo
3 Izithombe ze-shrimp tattoos
Wayengubani uCamarón de la Isla?
UCamarón wazalelwa eSan Fernando, eCádiz, ngo-1950, owokuqala emndenini wamaGypsy. Khona-ke igama lakhe kwakunguJosé Monje Cruz, empeleni, igama elamelula futhi elaphenduka isiteketiso sakhe sobuciko alitholakalanga kwaze kwaba kamuva, ngenxa kamalume wakhe, owayecabanga ukuthi umfana ufana kakhulu nalezo zilwane ngoba wayephaphathekile futhi ebhlophe. I-“de la Isla” yenezelwa ngisho nakamuva ukuze iphawule lapho ivela khona, njengoba iSan Fernando isesiqhingini saseLeón.
Esemncane wayenezinkinga ezinkulu zezomnotho, ngakho waqala ukucula ukuze athole imali. Kancane kancane wazuza ukuthandwa ngenxa yezinhlelo zakhe embukisweni kanye nabaculi abahambisana noJuanito Valderrama ohambweni lwabo.
Kodwa impumelelo iza kamuva, ngemva kwalokho ukuthuthela eMadrid futhi ikakhulukazi lapho ukhulula i-albhamu inganekwane yesikhathi, enye ye-flamenco ebaluleke kakhulu, lapho ehlanganisa ngisho nezinkondlo zika-Lorca, nalapho kuvela khona imisindo evamile ye-jazz ne-rock. Nokho, udumo lwakhe luyaqhubeka lukhula, ngemva kweminyaka embalwa ebulawa umdlavuza wamaphaphu owawubangelwa ukuba umlutha kagwayi.
Nanamuhla ukhalelwa futhi kukhunjulwe njengenganekwane, futhi inesiqubulo sayo phakathi kwabalandeli nabalandeli bayo: "UCamarón uyaphila."
Imibono ye-Shrimp Tattoo
Manje njengoba sesazi okwengeziwe ngalo mculi, Ake sibone ukuthi singayisebenzisa kanjani ngokunenzuzo ku-tattoo. Iqiniso liwukuthi inamathuba amaningi kakhulu kunalokho okubonakala ekuqaleni:
Ngaphandle kokungabaza, Uhlobo lokuqala lwe-tattoo olungafika engqondweni ngemva kokucabanga ngalo mculi yilo lapho abonakala khona kubo bonke ubukhazikhazi bakhe, futhi ngenxa yalokho akukho okufana nokungokoqobo.. Bheka umdwebi owazi ukuphrinta yonke impilo edingwa yilezi zinhlobo zama-tattoos: ukuthungatha, ukuvezwa, ukuma… konke kufanele kudlulisele idrama yempilo kanye nohlobo lomculo abeyingcweti kuwo.
I-tattoo yezandla zama-shrimp
Okunye obekukhunjulwa kakhulu ngalo lo mculi yizandla zakhe, futhi hhayi nje ngoba wayazi indlela yokubaphatha ukuze ashiye wonke umuntu engakwazi ukukhuluma ngobuciko bakhe, kodwa futhi ngenxa yokuthi wayenomdwebo omncane wenkanyezi nenyanga phakathi kwesithupha sakhe nomunwe wokuqala. Izandla ziyingxenye ecacile kakhulu yomzimba, ngakho-ke uma uphefumulelwe i-tattoo yalesi sitayela, khetha isikhundla esijwayelekile, isibonelo, ukushaya izandla noma nge-cigar.
I-twist ejabulisayo nethandeka kakhulu ukukhumbula umculi wakho oyintandokazi amele isidlaliso sakhe ngendlela engokoqobo: imfunzi enemilenze yayo, umzimba wayo omncane onama-arch kanye nombala wayo obomvu othandekayo. Ihambisane namanye amagama, isiginci noma isiqhingi esincane ukuze ukudlala ngamagama kungalahleki futhi yilokho, usuvele unayo i-Camaroncito de la Isla yakho. Isitayela esingaba sihle ngesendabuko, nakuba ikhathuni futhi kumnandi kakhulu futhi ivumela ukudlala okwengeziwe ngombala.
Umculi wesitayela sendabuko
Yilokho isitayela sendabuko esinakho: konke kubukeka kukuhle futhi ngaphezu kwakho konke akulokothi kuphume esitayeleni ngoba yisona esingaphelelwa isikhathi. Dlala ngezinwele ezazigqokwe esikhathini esidlule ukuze unikeze ivolumu kumklamo futhi ungayilayishi kakhulu ikhathuni ukuze ingaphelelwa amandla. Uma ukhetha ukubeka uhlaka kuyo noma ihambisane nenye into, sebenzisa izinkomba, ezifana nezandla noma irekhodi.
I-tattoo ye-Shrimp encane
Ingabe akhona ama-tattoo ama-Shrimp amancane? Impendulo inguyebo, akhona, futhi nawo apholile futhi angempela kakhulu. Ungakhetha ukumane wenze iphrofayili yomculi ngomugqa olula, izandla zakhe noma isiginci. Ungambonisa ngisho uma uthanda umklamo oyinkimbinkimbi, imfihlo iwukuthola umklamo olula onombala omncane. Ukuba imodeli encane, lesi siqeshana singcono ezindaweni ezifana nezandla, lapho kufakwe khona ngokwemvelo.
I-tattoo ye-shrimp tattoo
Futhi siphetha nge-tattoo yalo mculi owaziwa kakhulu, lowo yena ngokwakhe waphatha ngesandla sakhe, phakathi kwesithupha nesandulela, inkanyezi nenyanga. Kunemibono eminingi mayelana nencazelo yayo (ukuthi ikhuthaza inyunyana phakathi kweMpumalanga neNtshonalanga, ukuthi ithonywe amaSulumane, ukuthi umdwebi we-tattoo uyayithanda nje ...) kodwa akekho owazi incazelo yayo ngokuqinisekile ... indlela yokondla inganekwane yakhe .
Sithemba ukuthi usithandile lesi sihloko se-tattoo se-Camaron nokuthi uthole umqondo omuhle womklamo wakho olandelayo. Sitshele, ingabe unayo i-tattoo yalo mculi? Iyiphi ingoma yakhe osincomayo? Kuyiphawule kanjani impilo yakho?
Izithombe ze-shrimp tattoos
Indlela ephelele ye-athikili: Ukudweba imifanekiso emzimbeni » Izinhlobo zamathambo » Umlingiswa Tattoos » Ama-tattoos e-Camaron, abalandeli bomculi odumile we-flamenco
Amanye ama-tattoo ahlobene
Ama-tattoos kaMjolnir, isando esimangalisayo sikaThor
Ama-tattoos ezempi: imibono engcono kakhulu nezincazelo
Thola imibono yakamuva ye-tattoo ku-imeyili yakho.